Best Disposable Plastic Apron Manufacturer uye Factory | Aosheng
Magasi epurasitiki anoraswa anoshandiswa kudzivirira mbatya dzako kubva kumarudzi mazhinji ekushatiswa. Epuroni inoraswa inogona kushandiswa zvakanyanya mukubika, kudya chikafu, kubata chimwe chinhu chingasvibisa hembe dzako. Izvo zvakare zvakanaka zvakasarudzwa kubata mumwe nemumwe kana iri novel coronavirus.
Chigadzirwa chinoraswa, chakachena, chiri nyore uye chine hupfumi.
✦ Natsiridza hupenyu hwako mhando, ponesa vashandi / nguva nemari.
Magasi epurasitiki anoraswa anoshandiswa kudzivirira mbatya dzako kubva kumarudzi mazhinji ekushatiswa. Iyo PE epurasitiki zvinhu. Epuroni inoraswa inogona kushandiswa zvakanyanya mukubika, kudya chikafu, kubata chimwe chinhu chingasvibisa hembe dzako. Izvo zvakare zvakanaka zvakasarudzwa kubata mumwe nemumwe kana iri novel coronavirus. Sekuraswa kwechigadzirwa, yakachena, iri nyore uye ine hupfumi.
Zvakare, epurasitiki inoraswa inogona kuve yakapetwa kuita saizi ruoko kuti zvive nyore kutakura nekushandisa. Mutengi wevatengi aigona kudhindwa pane kurongedza bhegi. Zvinogona kuvandudza hupenyu hwako mhando, kunze kwevashandi / nguva nemari. Qingdao Aosheng Plastic Co., Ltd ari nyanzvi gadzira ane makore anopfuura makumi maviri 'ruzivo kuburitsa Pe epurasitiki masking firimu. Kana iwe uine chero dambudziko, usazeze kutitaurira. Nomwoyo wose tariro pamwe nemi.
Magasi epurasitiki anoraswa anoshandiswa kudzivirira mbatya dzako kubva kumarudzi mazhinji ekushatiswa. Iyo PE epurasitiki zvinhu.
Epuroni inoraswa inogona kushandiswa zvakanyanya mukubika, kudya chikafu, kubata chimwe chinhu chingasvibisa hembe dzako.
Izvo zvakare zvakanaka zvakasarudzwa kubata mumwe nemumwe kana iri novel coronavirus. Sekuraswa kwechigadzirwa, yakachena, iri nyore uye ine hupfumi.
Zvakare, epurasitiki inoraswa inogona kuve yakapetwa kuita saizi ruoko kuti zvive nyore kutakura nekushandisa.
Mutengi wevatengi aigona kudhindwa pane kurongedza bhegi. Zvinogona kuvandudza hupenyu hwako mhando, kunze kwevashandi / nguva nemari.
Details: Disposable Plastic Apron
100pcs / mupumburu, 1roll / bhegi uye 10bags / bhokisi
Pashure: Kutenderera Firimu Machine
Zvadaro: Disposable Plastic Gloves